कोरोना रोकथामका लागि रू. १० करोड खर्च
रुकुम । रुकुम पश्चिममा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि रू. १० करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ । रुकुमपश्चिमका ६ ओटा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिमसम्म रू. १० करोड २२ लाख ६८ हजार ३३४ खर्च भएको हो ।
त्यसमध्ये ६ ओटा स्थानीय तहहरूले रू. १० करोड २ लाख ६९ हजार १३३ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले रू. १९ लाख ९९ हजार २०१ खर्च गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खर्च गरिएको रकमबाट सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको बताए ।
त्यस्तै सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीका लागि पनि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरिएको प्रजिअ पौड्यालको भनाइ छ । रुकुम पश्चिमका ६ ओटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा वढी चौरजहारी नगरपालिकाले रू. ३ करोड ८९ लाख २० हजार ६५१ खर्च गरेको छ । पीसीआर ल्याब सञ्चालन तथा स्वयंसेवक पारिश्रमिक गरी रू. ७४ लाख ९३ हजार ७८८ खर्च भएको नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताए ।
उनका अनुसार आइसोलेसन अस्पताल तथा क्वारेन्टिन निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य र अन्यमा रू. १ करोड ९९ लाख ६१ हजार ९०७ खर्च भएको छ । नगरपालिकाले दैनिक छाक टार्न मुश्किल भएका ६२८ घर परिवारलाई २० लाख को राहत वितरण गरेको बताएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम, तयारी, उद्दार, राहत तथा पुनःस्थापना शीर्षकअन्तर्गत स्वास्थ्य समग्री खरीद तथा जोखिम भत्तालगायतमा रू. ९४ लाख ६४ हजार ९५६ खर्च गरेको बताएको छ । चौरजहारीले जिल्लामै पहिलोपटक पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
त्यसैगरी आठबीसकोट नगरपालिकाले रू. १ एक करोड ९६ लाख ६३ हजार ६१२ खर्च गरेको छ । अस्पताल निर्माण तथा व्यवस्थापनमा रू. १ करोड १७ लाख ८१ हजार र क्वारेन्टिन निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा रू. ३१ लाख १४ हजार खर्च गरेको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवप्रसाद लम्सालले बताए ।
यसका साथै औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरीदमा रू. ११ लाख ३३ हजार, विपद्को समयमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार जोखिम भत्ता, खाजा तथा यातायात खर्चबापत रू. ३ लाख ३६ हजार खर्च गरिएको छ भने विपन्न तथा दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकाहरूलाई रू. १८ लाख ६३ हजार बराबरको राहत वितरण गरिएको छ । यस्तै देशका विभिन्न स्थानमा रहेकालाई उद्दार गरेर नगरपालिका ल्याउँदा रू. १४ लाख ३४ हजार खर्च भएको बताइएको छ ।
नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रू. १७ लाख २० हजार ७४० जम्मा भएको नगरपालिकाले बताएको छ । आठबीसकोटले आइसोलेसन अस्पताल समेत सञ्चालन गरेको छ ।
यसैगरी मुसिकोट नगरपालिकाले रू. १ करोड ४६ लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ । विभिन्न वडामा ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोर्पान गर्दै आएका व्यक्तिहरूका लागि रू. २७ लाख ४२ हजार बराबरको राहत समाग्री वितरण गरिएको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार रू. ३८ लाख ४२ हजार स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरीदमा खर्च भएको छ ।
नगरपालिकाले आइसोलेसन भवन निर्माणका लागि रू. ३० लाख र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र सञ्चालनमा रू. ४१ लाख ५० हजार खर्च गरेको बताएको छ । नगरपालिकाले विभिन्न स्थानबाट मजदुर र विद्यार्थीलाई उद्दार गर्दा रू. ३ लाख ५० हजार र कोरोनाका शंकास्पद बिरामीहरूलाई अस्पताल लैजाँदा एम्बुलेन्स भाडा शीर्षकमा रू. १ लाख ४५ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेको छ भने जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सूचना प्रकाशन, प्रसारणमा रू. ४ लाख ७० हजार खर्च भएको खड्काले बताए ।
नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकबाट रू. ८५ लाख ६८ हजार प्राप्त भएको थियो । यस्तै विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट रू. ४ लाख ५५ हजार सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको थियो ।
त्यस्तै त्रिवेणी गाउँपालिकाले रू. १ करोड २२ लाख १६ हजार खर्च गरेको स्वास्थ्य शाखा संयोजक वीरबहादुर डाँगीले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी रू. ५३ लाख ८८ हजार क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा र रू. ३४ लाख ७ हजार स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा खर्च गरेको छ ।
यस्तै स्वयंसेवक परिचालनमा रू. १५ लाख ८१ हजार, आइसोलेसन निर्माणमा रू. ८ लाख २८ हजार, नागरिक उद्धारमा रू. ५ लाख २९ हजार, सूचना तथा सञ्चार खर्चमा रू. ९९ हजार र विविध शीर्षकमा रू. ३ लाख ८२ हजार खर्च भएको स्वास्थ्य संयोजक डाँगीको भनाइ छ । यी खर्चको व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले रू. १५ लाख र पालिकाले स्थापना गरेको कोषमा रू. १० लाख जम्मा भएको र बाँकी खर्च गाउँपालिकाले बेहोरेको बताइएको छ ।
त्यस्तै बाफिकोट गाउँपालिकाले रू. ९५ लाख ३२ हजार खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशकुमार गुरुङले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र सञ्चालनमा रू. १६ लाख ६० हजार र स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्री खरीदमा रू. २१ लाख खर्च भएको जानकारी दिए । अधिकृत गुरुङका अनुसार गाउँपालिकामा रू. ३७ लाख ५० हजार बराबरको राहत वितरण गरिएको छ भने रू. २० लाख २२ हजार जोखिम भत्ता वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकाले रू. ५२ लाख ३६ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यो खर्च सबै स्थानीय तहमध्येकै कम पनि हो । गाउँपालिकाले औषधिजन्य सामग्री खरीदमा रू. ९ लाख ३६ हजार र क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा रू. २५ लाख ४४ हजार खर्च गरेको छ । खाद्यान्न तथा राहत वितरणका लागि रू. १० लाख, पीसीआर परीक्षण तथा ढुवानीमा रू. ३० हजार, अलपत्र मजदुर तथा विद्यार्थीको उद्दारमा रू. ७ लाख २४ हजार खर्च भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपालसिंह विष्टले बताए ।
बारीमै कुहिन थाल्यो स्याउ[२०७७ भदौ, २५]
नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य : ठूली दहको ठूलै आकर्षण[२०७७ भदौ, २२]
नेपालगञ्जको ‘वाटरपार्क’ पर्यटकीय स्थल बन्दै[२०७७ असोज, १६]
बजेट अभावले सिद्धार्थ रंगशालाको काममा ढिलाइ[२०७७ असोज, १५]
कावासोतीका किसान धान छाडेर कागतीखेतीतर्फ आकर्षित [२०७७ असोज, १४]
१० वर्षमा सिद्धार्थ रंगशालाको निर्माण कार्य १० प्रतिशत मात्र[२०७७ असोज, १४]
नेपालगञ्जको ‘वाटरपार्क’ पर्यटकीय स्थल बन्दै